Dad Badan Oo Fanaaniin Ah Ayaa U Dabaaldegay Dhaxalka David Bowie Hal Sano Oo Uu Geeriyooday | Abuurista khadka tooska ah
Waa tan sida fanaaniinta adduunka ay ugu dabaaldegaan dhaxalka David Bowie
Manuel Ramirez | | Fanaaniin, Dhiirrigelinta
David Bowie ayaa ahaa mid ka mid ah tirooyinka ugu dhiirigelinta badan farshaxanno iyo naqshadeeyayaal badan. Awooddaas aan ku beddelayno oo aan ula qabsannay sannado badan, waxay u adeegtay inay noqoto isha dhiirrigelinta dad badan, sidaa darteed hal sano dhimashadiisa ka dib, waxba kama hadhin inaan qabanno laakiin waxaan soo uruurineynaa qayb ka mid ah dhaxalka ay fannaaniin badan uga tageen sannadkan inaan xusuusto waqtigiisii ​​adduunkan.
Maalinti dhimashadiisa sanad ka hor, saacado gudahood shabakadaha bulshada ayaa bilaabay inay u guuraan si ay u sharfaan muusikiistaha, jilaaha iyo hormoodka muuqaalka (xitaa wuxuu u yimid inuu rinjiyeeyo). Taas sawir qariib ah Ziggy Stardust xitaa Boqorka Goblinta ee kujira Gudaha Labyrinth, farshaxanistani wuxuu ku guuleystey inuu boos ka helo dhaqanka pop-ka iyo xusuusta dad badan, sida ay tahay kiiska sawirada aad hoos ka heli doontid.
1 Halen cagaaran
2 Max saliba
3 Kate laird
4 Stanley chow
5 Stephen cheetham
6 Joe Wilson
7 Kelly McKernan Cavanah
9 Jean jullien
11 Haa scott
12 Kilian Eng
13 Samantha hogg
14 Dagmara matuszak
15 Joe murtagh
Tani waxay ahayd GIF ugu badan dhimashadii farshaxanka ka dib oo ay abuurtay Helen Green, oo iyadu abuurtay sawir ka duwan dhammaan sannadihii Bowie.
Isaguna kan ayuu u hayaa xusuuso albumkii ugu dambeeyay ee David Bowie kaas oo aad ku neefsan karto dareenno kale.
Wuxuu u sawiray Bowie inuu yahay dhinaca joogtada ah ee booska, deegaan.
Abaalmarintaan farshaxanleyda ah ee David Bowie oo ay isku dayeyso qabsado noloshiisa sannadihii la soo dhaafay min Ziggy ilaa Blackstar.
Stanley Chow ayaa muujinaya tan sawir gacmeed sawir qaade ah albumkiisa Aladdin Sane.
Lagu daray Bowie gudaha uu gallery The Outines.
Waxay abuurtay aragti ah in ka qaado dhiirrigelinta Spiders From Mars mid ka mid ah bandhigyadiisa.
Kelly McKernan Cavanah
La biyo-biyoodka ayaa ah halyeeyada sawirkan si loogu gudbiyo midabada qurxoon ee Ziggy Stardust.
Una Bandhigii astaanta u ahaa Bowie inaad xaqiiqdii ogayd. Waxaa sameeyay naqshadeeyaha garaafka Isbaanishka CraniDsgn.
Sawir ah in waxay muujinaysaa murugo iyo naxdin weyn oo ahaa dhimashada Bowie.
Wixii dhalashada Bowie Von ee 65aad muujiyey boodhadhkan aragtida weyn Naqshadeynta.
Gacanta ayaa jiiday Bowie sida Ziggy Stardust. Mid kamid ah ixtiraamka ay bixiso Jelly London.
Eng wuxuu ku abuuray shaqadan quruxda badan ee farshaxanka leh taabashada jannada.
El Boqorka goblinta ayaa ka muuqda sawirkan.
Dagmara waxay lashaqeysay Neil Gaiman Melinda. Waa taageere bowie wuxuuna abuuray sawirkan 2010.
Farshaxanno ay soo mareen tan iyo markii Jimmy Hendrix ilaa Mick Jagger, sidaas darteed waxay siineysaa nuxur ka duwan sawirka muusikiiste weyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Waa tan sida fanaaniinta adduunka ay ugu dabaaldegaan dhaxalka David Bowie
Waxyaabaha la xardhay qarnigii XNUMXaad aad bay u yar yihiin oo Raajo ayaa loo baahday si loo xalliyo qarsoodigooda
Abuuri palettes midab bilaash ah oo leh Qaboojiyeyaal